उपत्यकामा ट्राफिक जाम कहाँ–कहाँ हुन्छ ? - inaruwaonline.com
उपत्यकामा ट्राफिक जाम कहाँ–कहाँ हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २२, २०७३ समय: ४:२४:२१
काठमाडौं, २२ माघ । उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त छ । एउटै चोकमा सवारीसाधनहरू घन्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौं र भक्तपुर जोड्ने मुख्य नाका कोटेश्वर सबैभन्दा धेरै जाम हुने क्षेत्र हो । यो चोक भएर दैनिक कम्तीमा ५७ हजार सवारी गुड्छन् ।
कोटेश्वर : काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम कोटेश्वरमा हुने गरेको छ । सडक विभागको तथ्यांकअनुसार कोटेश्वर हुँदै मनोहरा पुलबाट मात्रै प्रत्येक दिन ५६ हजार ९८ सवारीसाधन आउजाउ गर्छन् । कोटेश्वर नाकामा मुलुककै दुई ठूला अरनिको र बिपी राजमार्ग जोडिएका छन् । अरनिको राजमार्गले विशेषगरी भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलाई जोड्छ । बिपी राजमार्गले सिन्धुलीदेखि पूर्वी नेपालका जिल्ला जोड्छ ।
चाबहिल : कोटेश्वरपछि धेरै जाम चाबहिलको पूर्वी सडकमा हुने गर्छ । यो सडकमा प्रतिदिन ४२ हजार दुई सय ५६ सवारी गुड्छन् । जोरपाटी, गोकर्ण, थलीलगायतका क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भएकाले यस सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेको हो ।
सिनामंगल : यो क्षेत्रमा दैनिक ३८ हजार दुई सय ६१ सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोडिएकाले यस सडकमा अत्यधिक सवारीसाधन गुड्ने र ट्राफिक जाम हुने गरेको छ ।
नारायणगोपाल चोक : चक्रपथको नारायणगोपाल चोकमा पनि धेरै जाम हुन्छ । विभागको तथ्यांकअनुसार यस चोकमा दैनिक ३४ हजार चार सय ७० सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । बुढानिलकण्ठ, बाँसबारी, गोल्फुटार लगायतका क्षेत्रमा बस्ति बाक्लो भएकाले यस चोक भएर अत्याधिक सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । जसले ट्राफिक जाम बढाएको छ ।
हनुमन्ते सडक : त्यसपछिको धेरै जाम हुने सडक भक्तपुस्थित हनुमन्ते सडक खण्ड हो । विभागको तथ्यांक अनुसार हनुमन्ते पुल भएर दैनिक ३३ हजार सात सय ४३ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । बालकोट आसपासका क्षेत्रमा घना बस्ति भएकाले यस सडकमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको हो ।
बल्खु : काठमाडौंस्थित बल्खु सडकमा त्यसपछि धेरै ट्राफिक जाम हुने गर्छ । यस सडक खण्डमा दैनिक ३३ हजार पाँच सय १२ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । हेटौंडा सडक खण्ड र कीर्तिपुर यही सडक भएर जाने भएकाले यहाँ अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको हो ।
बनस्थली : चक्रपथ सडक खण्डको बनस्थलीमा पनि अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गर्छ । यस सडक खण्डमा दैनिक ३३ हजार चार सय ६६ सवारी साधन गुड्ने गर्छ । चक्रपथ सडक खण्डको मनोहरा सडकमा पनि अत्याधिक ट्राफिक जाम हुन्छ । यस सडकमा दैनिक ३२ हजार सात सय ८८ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् ।
सातदोबाटो : चक्रपथ सडक खण्डै सातदोवाटो जक्सनमा पनि धेरै ट्राफिक जाह हुन्छ । यस सडकमा दैनिक २८ हजार ८ सय ७९ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् ।
बालाजु : बालाजू वाइपास सडकमा पनि धेरै ट्राफिक जाम हुन्छ । यस सडकमा दैनिक २१ हजार चार सय २४ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । त्यस बाहेक सातदोवाटो दक्षिण चपागाउँ तर्फ जाने सडकमा पनि ट्राफिक जाम हुने गर्छन् । यस सडकमा दैनिक १६ सय ८३ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् ।
नागढुंगामा : मुलुकको मुख्य नाका नागढुंगामा पनि ट्राफिक जाम हुने गर्छ । यस सडकमा दैनिक २२ हजार ९६ सावरी साधन गुड्ने गर्छन् ।
यहँ पनि हुन्छन् ट्राफिक जाम
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सडक विभागले तोेके भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा पनि अत्याधिक ट्राफिक जाम हुन्छन् । महाशाखाका अनुसार सवैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र कलंकी चोक हो । त्यसपछि सवैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम हुने जक्सन थापाथली चोक हो । ट्राफिक जाम हुने त्यसपछिको क्षेत्र सोह्र खुट्टे, नयाँ बानेश्र चोक, रत्नपार्क आसपासका क्षेत्र, त्रिपुरेश्वर चोक हुन् ।
सहरका भित्र तर १८ मिटर चौडा सडक सेकेण्डरी तहको रुटमा राखिएका छन् । यस अन्तर्गत बुढानिलकण्ठ–नारायणगोपाल चोक, नयाँ बजार–कीर्तिपुर–बल्खु–कालीमाटी–त्रिपुरेश्वर, नयाँ बसपार्क–गाेंगवु–ठमेल–बागबजार लगायतका सडक यस रुटमा समावेश छन् । यस रुटमा १० मिटरका बस सञ्चालन हुन्छन् । यसमा ६० यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । यसका लागि चार सय ३७ बस चले पुग्छ । यसले उपत्यकाका यात्रुलाई प्रतिदिन ६७ हजार पाँच सय किमि यात्रा गर्दा समेट्न सक्छ । यसो हुँदा १८ हजार चार सय किमि यात्रा घट्न पुग्छ र सरकारलाई प्रतिदिन एक लाख २१ हजार किमि यात्रा फाइदा हुनपुग्छ ।
उपत्यकाका सवारीसाधनको रुट पुनर्संरचना आवश्यक
काठमाडौं दिगो सहरी आयोजनाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले रुट पुनर्संरचना गरेको भए ट्राफिक जाम दुई वर्षअघि कम भइसक्थ्यो ।
एसियाली विकास बैंक र विश्व वातावरण कोषको सहयोगमा दुई वर्ष अध्ययन गरेपछि आयोजनाले उपत्यकाको रुट पुनर्संरचना गर्न दुई वर्षअघि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नै ल्याएन । मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार रुट पुनर्संरचना भए ट्राफिक जाम कम हुने मात्रै होइन प्रतिवर्ष ३ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँको इन्धनसमेत बचत हुन्थ्यो ।
‘रिपोर्ट गहन अध्ययनपछि तयार भएको हो । दुई वर्षअघि नै हामीले उक्त रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएका हौँ । तर, कार्यान्वयनमा आएन । किन यस्तो भयो, थाहा भएन । कार्यान्वयनमा आए प्रतिवर्ष तीन अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन बचत हुन्थ्यो,’ आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले भने ।अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।